Tanzania: Mibilaogy sy Mibitsika ny Tanzania@50 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Desambra 2011 7:40 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Swahili, English
Ny 9 Desambra 2011 dia andro lehibe tokoa ho an'ireo Tanzaniana satria ny ampahany lehibe indrindra amin'ny taniben'ny Repoblika Mitambatr'i Tanzania, Tanganyika, dia feno 50 taona. Aty anaty aterineto, mankalaza izany ireo bilaogera sy mpandefa bitsika sady misaintsaina izay hoavin'i Tanzania.
Ny Faribolan'ireo Bilaogera ao Dar es Salaam dia nandrisika ny bilaogera hanamarika ity hetsika ity amin'ny alàlan'ny lahatsoratra anaty bilaogy tamin'ny 9 Desambra.
Tsotra kely ireo fepetra:
Manoratra lahatsoratra anaty bilaogy mikasika ny lohahevitra.
Mametraka ny tenifototra #DarBlogCircle sy ##Tanzania50 ho an'izay ao amin'ny Twitter .
Dia zarao eto : http://www.facebook.com/DarBlogCircle
Misternv dia mizara fintina nalaina avy amin'ny taratasy iray nosoratan'i Mwalimu Nyerere ho an'ny ministerany sy ny tompon'andraikitry ny antoko tamin'ny 1964:
Sary famantarana Ofisialy ny Tanzania 50 taona. Loharanon-tsary governamantan'i Tanzania.
Ho tian'izy ireo tokoa ve [ireo olom-pirenena tsotra] ny iangaviana lava izao mba tsy hampiasa ny arabe satria ny Filoha na ny minisitra iray na ny kaomiseram-paritra dia hitsangatsangana eo ny tolakandro? (…) Tena hahatsapa rehareha fatratra sy fitiavan-tanindrazana tokoa ve ry zareo isak'izay fotoana iandrasana azy ireo hampiato ny ataony sy hijaridina hijery fotsiny manampahefana iray vao avy voatendry ary mety tsy mbola hitan'ny maro hatrizay, hitsofana ny hiram-pirenena? (…) Ny fahamendrehana tsy ilàna fisehosehoana be izany mba hitazonana azy: sady ny fisehosehoana be amin'ny endriny rehetra dia tsy mankaiza. Na dia voaporofo aza hoe nankafy an'izany ny vahoaka – izay mbola isalasalàko aza – dia mbola ho ratsy foana e ; ary dia mbola ho adidintsika hatrany ny manakana izany sy miteny amin'ny vahoaka fa diso ny zavatra izay nahafaly azy ireo hatrizay. (…)
Taorian'ny nanasongadinana zavatra vitsivitsy hoe hahafahan'i Tanzania manao tsaratsara kokoa, David Mugo izay monina any Tanzania efa ho 18 volana izao, dia mamarana ny lahatsorany amin'ny filazàna hoe :
Raha fintinina, heveriko fa i Tanzania no mbola isan'ny firenena iray goavana indrindra notsidihako taty Afrika. Mendrika ny vahoaka ao. Arahaba nahatratra ny fetin'ny fahaleovantena, saintsaino ny fahaleovantena anananareo, ny dikany ho anareo, ho an'ity andian-taranaka ity sy ireo andian-taranaka ho avy eo. Mametraka fanamby amin'ireo tanora aho mba hanana fijery ny zavatra rehetra lavitra kokoa noho ny an'ireo zokiolona mpitondra antsika. Mbola mamerina ny arahaba. Ho ela velona i Tanzania sy ny vahoaka ao aminy.
Ilay Tanzaniana mafàna fo sady bilaogera, Ashura, dia manontany tena hoe “Aiza ho aiza isika izao 50 aty aoriana?”:
Ao anatin'ny fanambaràn'i Arusha ny taona 1967 nataon'i Mwalimu Nyerere dia hoy izy ‘Ny Fahaleovantena dia midika fahavitàn-tena. Tsy misy dikany ny fahaleovantena raha toa ny firenena iray mbola miankin-doha amin'ny fanomezana sy fampindraman'ny hafa mba hivoarany…’ ndeha isika hanontany ny tenantsika manokana androany raha tsy niankin-doha tamin'ny fanomezana sy ny fampindramana i Tanganyika ho an'ny fampivoarana azy? Eny no valiny ary izany no mahatonga ny ankamaroan'ny tany namidy tamin'ny orinasa vahiny sy namelàna ny Tanzaniana tsy hanan-tany no sady tsy nomena tambiny. Heverin'ny governemantantsika hoe ny fandrosoantsika dia ny vahiny no hitondra azy fa tsy misy idiran'ny Tanzaniana, araka ny filazan'i Mwalimu Nyerere, tsy afaka hiantehitra amin'ny firenena vahiny isika ka hanao araka izay tiantsika! Dimampolo taona izay, hatramin'ny nahazoan'i Tanganyika ny fahaleovantenany ny 09 Desambra 1961, mbola mikorosy hatrany ny firenena ary tsy mandroso velively. Tamin'ny 1967, ny £ 1 nisanda Tsh. 16.6 , amin'izao fotoana £1 misanda 2650 mahery, midika zavatra tsy manjary izany raha vao resaka toe-karena no resahana.
Mwalimu Nyerere mankalaza ny fahaleovantena. Sary nozaraina ao amin'ny pejy Facebook Tanzania-Have-Your-Say (Tanzania-Mitenena-Ianao)
Ao anatin'ny fankalazàna ny faha-50 taonan'ny fahaleovantena, dia manoratra toy izao ny The Wayward Press :
Amin'izao fotoana izao, ao anatin'ny fotoana tetezamita sy ny fisalasalàna lalina ny firenentsika. Tsy manana tanjona kinendry na vina ara-kevitra goavana ny politikantsika mba hitarihana antsika handroso bebe kokoa. Toa mandrafitra izany eny am-pandehanana eny fotsiny ireo mpitondra antsika. Mitsipotipotika ny fahalalantsika ny tantarantsika ary mifahatra amin'ny fijery dison'ny fahatsiarovana ny lasa. Ny maha-isika antsika ara-kolontsaina no manjavozavo, izay ampahafantarina amin'ny fomba vahiny fa tsy mijery izay endrika eto anatiny. Ny maha-Tanzaniana amin'izao vaninandro izao dia mahatonga ny tena ho olona manana otrika hery goavana nefa tsy mahazo antoka ny hoaviny.
Ny bilaogy The Creatively Maladjusted dia mandinika ny fitorahana bilaogy sy ny fampahalalam-baovaon'olon-tsotra tao Tanzania tanatin'ny 50 taona :
Ao anatin'ny firenena iray tahaka an'i Tanzania izay toa voasivana ny fandrakofam-baovao any, na farafaharatsiny tsy mitombina / mampisalasala, ny fitorahana bilaogy (ary ny fampahalalam-baovaon'olon-tsotra amin'ny ankapobeny) dia manokatra tontolo vaovao iray manontolo feno vintana. “Afaka manome ny feony ho an'ireo vahoaka Tanzaniana ny fampahalalam-baovaon'olon-tsotra. Izany no tena vintana goavana azoko sainina amin'ny fo tsy miangatra”- Elsie avy amin'ny bilaogy The Mikocheni Report. Ny valinteny mahazatra ( matetika ampiasaina hanapahana resaka tsy hihitatra) izay henoko anaty resadresaka momba ny fampahalalam-baovaon'olon-tsotra any Tanzania, dia hoe tsy manana fahafahana miditra amin'ny aterineto ny ankabeazan'ny olona. Any amin'ny faritra ambanivohitra izay onenan'ny 75%-n'ny mponina, io fahafahana miditra io no tsy isalasalàna fa fanamby fototra (mifandray amin'ny tsy fahampian'ny famatsiana herinaratra, hatramin'ny fahavitsiana sy ny fahalafosan'ny cybercafés) , saingy miova haingana be io toe-draharaha io, na eo amin'ny tolotra izany, na eo amin'ny tinady, noho ny fitomboan'ny fahamoran'ny fidirana aterineto amin'ny alalan'ny finday sy ny fahalinan'ny tanora amin'ny fifandrohizana arantin'ny fampahalalam-baovaon'olon-tsotra. Any amin'ireo tanàn-dehibe dia te-hilaza aho hoe ny ampahany betsaka amin'ny vahoaka no farafaharatsiny mpampiasa Facebook, ary angamba amin'ny alalan'ny rohy avy ao amin'ny Facebook dia manam-pahafahana betsaka miditra any amin'ny bilaogy / fanaovan-gazetin'olon-tsotra noho ireo olona monina any Andrefana…
Ahmed ao amin'ny VijanaFM dia manontany hoe, “Tanzania 50 taona, inona no azontsika haseho momba izany?”:
Mieritreritra aho hoe misy fanamby manomboka eto amin'ny fanamafisana ny fampisaintsainana ny olona momba izay dimampolo taona lasa izay. Mila mahatsiaro ireo fotoana mamy isika saingy mila mahatsiaro mandrakariva koa ny andro manjombona. Manana fanamby goavana be isika ary, araka ny fomba fiteny, mahatsiaro ho miadana noho ny tany amin'ny folo taona lasa ve izao ny Tanzaniana ankehitriny, ary ny tany amin'ny 50 taona lasa? Mety ho tsia no valiny. Heveriko fa tsy tokony hanembonembona fotsiny ny andro firavoravoana fahiny isika fa tokony kosa handini-tena lalina, na izany ny mwananchi na ny mpitarika ka hanontany ny fomba azontsika hananganana ampitso tsaratsara kokoa. Izany dia satria heveriko fa maro amintsika no mivaky loha mikasika izay ho endriky ny 50 taona ho avy.
Karim Hirji, mpampianatra biostatiques ao amin'ny Anjerimanontolo momba ny Fahasalamana sy ny Siansa momba azy ao Muhimbili, dia mifanakalo resaka momba ny rafi-panabeazana ao Tanzania taorian'ny 50 taona nahazoana fahaleovantena :
Fony andron'i Uhuru, tsy nisy na mpitsabo iray aza navoaka avy eto Tanzania. Ankehitriny, ny kilasim-pikarohana momba ny fomba fitsaboana tantaniko ao amin'ny Anjerimanontolo momba ny Fahasalamana sy ny Siansa momba azy ao Muhimbili dia manana mpianatra 150. Ny safidy manadàla mahazo ahy dia manome kisarisary ny toe-javatra mikasika ny ankamaroan'ireo zavatra ampianarina ao amin'ny anjerimanontoloko sy, raha ny marina, any amin'ireo anjerimanontolo rehetra manerana ny firenena. Nitombo be ny isan'ny mpianatra, saingy ny isan'ny mpampianatra sy ny fitaovana enti-mampianatra kosa tsy toy izay. Ny anjerimanontolo sasany dia manana departemanta iray ahitàna mpandraharaha 20 eo ho eo, nefa na iray aza tsy misy manana doctorat. Vao avy nanao fampiasàna namadibadika ny fombam-pampianarana marosampana izahay, Kanefa, azo lazaina ho tsy nisy mihitsy departementa mba nanova ny votoatin'ny zavatra ampianariny.
Ao amin'ny Twitter, mankalaza ny Tanzania@50 miaraka amin'ny tenifototra Tanzania50 ireo mpandefa bitsika :
dgtlUbun2: Tsaroako IREO aina marobe lavo FAHATANY tamin'ny faharendrehan'ny sambo Zanzibar & sy aina maro koa LAVO noho ny rafitra be kolikoly. #Tanzania50
@BabatundeJnr: Arahaba nahatratra ny tsingerintaona ry firenen'ilay Afrikana lehibe Julius Nyerere #Tanzania50. Iriana ho an'ny vahoaka ny fahafahana amin'ny kolikoly & sy ny faharatsiam-pitantanana. #Africa
@ChickAboutTown: Arahaba nahatratra ny faha–50, Tanganyika! (Dar dia manjelanjelatry ny afomanga.) #Tanzania50
@SalimHatib: Aza adino velively ireo mahery fo nanao sorona ny ainy nahatonga antsika ho amin'izao andro maharavo izao. Arahaba nahatratra ny fetin'ny fahaleovantena #Tanzania50
@dgtlUbun2: Ao Tanzania irery ihany, izay ny 80%-n'ny vahoaka no miaina anaty fahantrana, NEFA ireo solombavambahoaka dia nahazo fisondrotan-karama 185% . Io no governemantan'i #Tanzania50 amperinasa.
@SwahiliStreet: azafady, fa ny fankalazàna ny fahaleovantena dia ahitàna ny fanehoan'ny polisy ny fomba fandravàna hetsi-bahoaka ve?
@KateBomz: Ary ny farany avy aty amiko dia mitodika amin'ny —> #Tanzania 50 taona, inona no azontsika haseho momba izany? nalefan'i @asalim86 http://vijana.fm/2011/12/07/ni-hamsini-ni-hamsini-tanzania-at-50-what-do-we-have-to-show-for-it/ Notehiriziko ho amin'ny fotoana farany ny tsara indrindra!
@tweetingchaga: Lasa aloha loatra ny fialàn'ny Britanika tao tanganyika tamin'ny 1961. Eny, izany no teniko #Tanzania50 @atititu @dizainatweets @jmkikwete
@Dunia_Duara: Bilaogy momba ny #Tanzania50. Vakio sy/na irotsaho @DarBlogCircle: facebook.com/DarBlogCircle
Nahazo ny fahaleovantenany tamin'ny Royaume Uni i Tanganyika tamin'ny 9 Desambra 1961, ary taty aoriana kely i Tanganyika dia nitambatra tamin'i Zanzibar mba hanome ny Repoblika Mitambatr'i Tanzania.